Vintage Nhau: Inowedzera Chikafu Spoilage, Kuchengetedza, uye Kuona Kwekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
Vintage Nhau ndeyeMinecraft -style vhidhiyo mutambo iyo yaunogona kurarama nayo mune ino digital nyika mune yakachena retro maitiro uye kuvaka. Zvakare, zita racho rinowanikwa kune yako GNU / Linux distro. Uye ikozvino neshanduro yayo 1.10, yekuvandudza iyo yasvika seyechipiri Regedza Mukwikwidzi, iwe unozogona kunakidzwa nekumwe kuvandudzwa uko kunosanganisira mabasa matsva uyezve nekuvandudza mune inoonekwa chimiro chemusoro.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve uyu mutambo wevhidhiyo, unogona shanyira yavo yepamutemo peji kana zvakare mune yepamhepo vhidhiyo yemutambo chitoro Humble Chitoro. Asi imwe yemitambo mitsva yaunogona kuwana mukuburitswa kutsva ndeyekuti chikafu hachigare, chinopera. Naizvozvo, iwe uchafanirwa kunyatso chengetedza ichi chikafu chikafu chauinacho kana icho chinoshatiswa. Chitarisiko chichava chakashata mushure mechinguva, saka iwe unofanirwa kuchengetedza zvaunopa nenzira yakanakisa.
Chikafu chega chega chichava nehupenyu kutenderera, uye chichava chitsva kune yakatarwa mazuva emazuva. Unogona magaka miriwo, kurapa nyama, manyowa chikafu chakaora yekurima, uye nekudaro unokwanisa kudya chikafu chiri nani. Basa rinonakidza mune iyi mhando yekupona yemutambo wevhidhiyo iyo isingawanzo sanganisira iyi mhando yehurongwa.
Uye kunze kwekuvandudza ikoko, iwe uchawanawo shanduko dzinoonekwa, ine mamwe makuru uye madiki maagusta kuitira kuti nyika mune ino vhidhiyo mutambo unoitika iratidzike zvirinani. Dzimwe gadziridzo dzine chekuita nemhepo, kuvandudzwa kwemarongero emwedzi, zuva rinozoshanduka kuita orenji / tsvuku mukati mekutenderera kwemasikati, kusimudzira pakuonekwa kwemvura uye nemhedzisiro yazvo, zvakare nekuda kwemabota anopenya zvakanyanya, gamma kururamisa, uye nezvimwe.
Iyo yakazara yakanaka pasuru yezvinhu zvitsva zvaunogona kunakidzwa nazvo Yenyaya Nyaya 1.10 kushambadzira. Shanduko hombe kubva yekutanga Kusunungurwa Mumiriri iyo yakaziviswa kune ino zita ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Vintage Nhau - Inowedzera chikafu chakaparadzwa, kuchengetedzwa, uye zvinowoneka zvinoonekwa
Ini ndaisaziva nezve kuvapo kwemutambo uyu. Ndatenda neruzivo !!!!
Yakaburitsa vhezheni itsva yeKali Linux 2019.3 ine Kernel 5.2 uye nezvimwe